ISTICMAALKA EE LA JECEL YAHAY: WANAAGSAN IYO WAXYEELO - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay lovage faa'iido: guryaha dawooyinka iyo contraindications ee dhirta
Kalluunka caruurnimada waxaa loo yaqaanaa celery qaboobaha, urta dhirta labaduba way isku mid yihiin. Warshadda waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa dawooyinka dadweynaha iyo daawooyinka dhaqameed ee ka yimaada cuduro badan. In this article waxaan ku baran doonaa si faahfaahsan oo ku saabsan la jecel yahay, iyo sidoo kale sifooyinka dawooyinka ee caleemaha iyo xididka geedka.
Lovage: Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada
Lovage waa ubax badan oo ubax ah iyo dhirta fruiting kaas oo ku guuleystay inuu ku faafo aduunka oo idil. Maaddaama ay ka kooban tahay tayada hodanka ah waxaa loo isticmaalaa karinta, kaxoolajiyada iyo daawada. Xirmooyinka iyo caleemaha geedka waxaa ka mid ah:
asiidhyada dabiiciga ah (malaarikada, qiimaha, acetic and malic);
Reinka iyo saliidaha lagama maarmaanka ah;
xanjo iyo furocoumarins;
sonkorta iyo dareeraha;
walxaha raadraaca iyo ascorbic acid.
Calorie lovage - 20 calories. Saameynta borotiinka, dufanka iyo karbohidratka:
borotiinka - 3.7 g;
carbohydrates - 7.6 g;
dufanka - 0.4 g
Waa maxay riyaaqa faa'iido leh
Qalabaynta daaweynta ee lovage waxay leedahay tiro balaadhan oo codsiyo ah: waxay ka caawiyaan in lagu daweeyo cudurrada wadnaha, wadnaha, dhuunta, neefsashada, iyo nidaamka urojiinka. Warshadani waxay leedahay tiro ficillo ah oo faa iido leh:
Dhibaatooyinka leh habka dheef-shiidka, decoctions waxay yareeyaan xanuunka caloosha iyo xiidmaha mindhicirka, hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka. Qalabkaan waxaa isticmaala nafaqada, oo ay ku jiraan cawska cuntada ee xaruntooda, la halgardhsashada buurnaanta - ka dib hababka dheef-shiid kiimikaadka ah, waa ay fududahay in lumiyo buundooyinkan dheeraadka ah.
Mashruuca GI wuxuu si fiican u saameeyaa: silverweed, gentian, dodder, yuqua, dharka, yamaaruggii caanaha, calendula, kalanchoe, stonecrop purple, dabocase, kaabajka Kale, sage.
Iyada oo neuroses, xanaaqa iyo walwalka, jacaylku si aan caadi ahayn u dhaqdhaqaaqo, ayaa caadi u ah hurdada. Geedhu waxay ka caawisaa samaynta dhiig, taas oo gacan ka gaysata xoojinta iyo cufnaanta xididdada dhiigga, iyadoo isticmaalka dheeraadka ah laga tirtiro dhiig-yaraanta.
Isgoysyada iyo looska ayaa si fiican u bogsanaya noocyada kala duwan ee nabarrada, boogaha iyo xagashada. Waxyaabaha carotene ee qeybo ka mid ah geedka ma aha wax ka yar dabacasaha, sidaas darteed waa faa'iido leh in la cuno si loo soo celiyo hawlaha aragga.
Ma taqaanaa? Lyubistok - ma aha oo kaliya xididka daawada, wakhtiyadii hore waxaa loo tixgeliyey warshad sixir ah. Aroosyada ayaa dhajiyay gogo 'jacayl-cawska' dharka arooska, sidaas awgeed nimankooda oo dhan waxay eegeen oo kaliya. Oo waxaa la socday wadaaddo dixir oo qoyan, oo cawskuna wuxuu u maleeyey taliyaal xoog leh oo ka soo horjeeda dabaylaha.
Sida loo isticmaalo lovage ee daawada dabiiciga ah
Xaglaha dhirta waxaa loo adeegsadaa farshaxanka sida maaddada ceeriin ee daawooyinka laga helo dhibaatooyinka caafimaad ee soo socda:
kaadida oo daciif ah;
bararka kelyaha iyo kaadiheysta;
catarrh ee xubnaha neefsashada;
Waa muhiim! Jacaylka ka sokow faa'iidooyinka wax soo saari karo iyo waxyeeleyn kara: adigoo qaadanaya daawo, waa inaad ka taxadirtaa qiyaasta dadka qaba dhibaatooyinka kaadida iyo kelyaha.
Gynecology, dhirta dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa in caabuqyada xubinta taranka haweenka, si caadi ah loo mariyo wareegga dhiigga, si loo yareeyo xanuunka inta lagu jiro maalmaha muhiimka ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa faa'iidada ee ku-raaxaysiga daaweynta nidaamka taranka - labka iyo dheddig labadaba (maaddooyinka firfircoon ee halbowlaha waxay kicinayaan wareegga dhiigga ee xubnaha maskaxda).
Daawooyinka loo yaqaan 'homeopathic therapeies' ayaa loo adeegsadaa daaweynta cudurrada wadnaha, cudurada cunaha iyo habka neef-mareenka, neurosis iyo boogaha. Dhakhaatiirtu waxay garawsan yihiin in celceliska jiilka leh isticmaalka joogtada ah ee cunnadu si weyn u hagaajinayso difaac.
Isticmaalka lovage ee daawada dhaqameed (cuntada)
Daawada dadweynaha, jacaylka ayaa muddo dheer loo aqoonsaday inuu yahay daawo wax ku ool leh oo leh codsiyo badan oo kala duwan. Decoction ee xididka ka caawisaa daaweynta dhibaatooyinka urinimada, qaba cudurka kalyaha, sida duri, iyo xanuunka caadada.
Diyaarso sida soo socota: pre-qoyan oo xididdada maalin (40 g) karkariyo ilaa litir biyo ah ilaa todobo daqiiqo. Maraq waa in loo qaybiyaa shan qaybood iyo cabitaanka inta lagu jiro maalinta.
Waa muhiim! Waxaa la aaminsan yahay in xididka aan la karinin, sababtoo ah marka qaybo ka mid ah saliidaha lagama maarmaanka u ah uumiga.
Tincture xayawaanka - Mid ka mid ah foomamka ugu muhiimsan ee codsiga ee daawada dabiiciga ah. Si aad isugu diyaariso qaado shaaha oo ah rooti rootan, ku shub hal galaas oo biyo karkaraya, ku adkeyso nus saac. Faleebo ayaa loo qaadaa si kor loogu qaado awoodda saddex jeer maalintii maalintaasna waxaa loogu talagalay.
Dhanka kale, faleebadani waxay ka caawisaa in lagu daaweeyo caabuqyada nadiifka ah ee maqaarka, waa in loo diyaariyaa tirooyin badan oo lagu badhaxo - loo isticmaalo waaskada leh cudurka psoriasis, canbaarta, neurodermatitis.
Lovage ayaa faa'iido weyn u leh sidii looga takhalusi lahaa dhibco da'da ah, cuntooyinka waa sida soo socota: shaaha shimbiraha dhulka iyo caleemaha waxaa lagu shubay 250 ml oo biyo ah karkaraya. Ku adkeyso saacad, kadibna isku kari ilaa labaatan daqiiqadood biyo nadiif ah, wejiga ku mayr maydh maraq laba jeer maalintii.
Maaskaro timo: 20 garaam oo la jarjaray xidid la qalajiyey 250 ml biyo karkaraya, ha u istaagaan darmuus 6-8 saacadood.
Isticmaalka xannaanada timaha: cumin, bergamot, zizifus, beeswax, lagenariyu, laurel, hops.
Ka dibna adkee isku dar ah, xoqin madaxa maqaarka, qoyan timaha dhererka oo dhan, madaxa ku duub tuwaalkana iska tag saacad. Ku dhaq biyo biyo diirran oo aan shaambo lahayn.
Faleebo loogu talagalay qashin-qubka: qaado oo ah rooti duugmo ah ku shub biyo karkaraya 150 ml, saacad ku adkeyso. Ka hor inta aadan diirin diirimaad, samee habka seddex ama afar jeer maalintii.
Sidee baa loo adeegsan karaa jacaylka cosmetology
Cawska-cawska waxaa loo isticmaalaa maaha oo keliya daawada - waa ka badan faa'iido leh kondomoole. Decoction ee warshad waxaa loo isticmaalaa in lagu soo celiyo timaha daciifay iyo kala qaybsan: cawska siinayaa timaha a iftiin caafimaad leh, silkiness iyo foorjirnimo.
Dumarka saliidda ee muhiimka ah waxay u isticmaalaan sida salaaxa. Abaalmarin, waxaa badanaa loo isticmaalaa sida caraf, iyo goobaha SPA-ga ah - sida qayb ka mid ah aromaterapy iyo hababka miisaanka. In warshadaha qurxinta, celery qaboobaha waa qayb ka mid ah deodorants iyo antiperspirants.
Maraq laga bilaabo lovage xidid la jajabiyey ka caawisaa ka takhaluso dhibco da'da, iyo codsaday on madaxa - si kicin koritaanka timaha.
Nettle, nasturtium, walnut, linden, periwinkle, cherry shimbir, peony, momordica, ash buur cas, amaranth waxaa badanaa loo isticmaalaa kikoemoolka.
Tallaalka antimicrobial ee cawska wuxuu ka dhigayaa mid waxtar leh cagaha barkada dhibaatooyinka maqaarka, sida geedka si firfircoon u dagaalamaan fangaska.
Waxyaabaha lagu naqshadeeyo ayaa sidoo kale lagu daraa habka loo nadiifinayo maqaarka wajiga iyo qoorta, kiriimyada antiseptic ee wejiga, gacmaha iyo lugaha. Daawooyinka geedaha waxay sameeyaan shaqo aad u fiican oo leh finanka iyo finanku.
Awoodda siinta wareegga dhiigga oo wanaagsan waxay caawisaa in la nasto oo la nasto shan iyo toban daqiiqadood oo qubeys ah.
Lovage iyo karinta
Sababtoo ah caraf udgoon ee basbaas, cawska ma aha qaybta ugu dambeysa ee karinta, iyo cagaarka, xididdada, iyo miraha lovage waa istaahilaan isticmaalka.
Xididdada waxaa loo isticmaalaa sida kudka oo ah budo ama la jajabiyey. Cunto, waxay si fiican u socotaa khudaarta kale ee saladhka, suugada suxuunta waaweyn, marka lagu daro, waxaa laga sameeyaa saliid kareysa. Laga soo bilaabo barxadda dhalinyarada cusub diyaariyo miraha candied iyo macaanka.
Cuntooyinka iyo caleemaha waxay u tagaan salad, koorasyo ​​koowaad iyo labaad, suugo iyo xilliyaal loogu talagalay hilibka, digaaga iyo kalluunka. Celery-ka jiilaalka ayaa caan ku ah subaga kala duwan iyo jiis iyo qasacad.
Leaves waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii lafdhabarta macmacaanka dabbaasha, oo lagu daray marinades. Dusha sare ee warshadda iyo abuurka ayaa siinaya dhadhan xiiso leh oo ah pickles. Lovage ayaa muddo dheer ku jirtay nafaqada ee cuntooyinka cuntooyinka - caafimaadka iyo miisaan lumis.
Ma taqaanaa? Askartii Reer Romaniga waxay qaateen miraha dhirta si ay ula dagaallamaan dhulalka fog: sidaas darteed, tusaale ahaan, fennel, dhir iyo laaluush ayaa ku dhacay England.
Sida loo diyaariyo xididdada iyo caleemaha of lovage
Dhirta ubaxyada ee bilaha June, mararka qaarkood July - ku xiran xaaladaha cimilada, beeritaanka abuurka wuxuu dhacaa bisha Sebtembar. Sannadka ugu horeeya ka dib markii la beero, kaliya caleemaha ayaa la goostay, iyaga oo isticmaalaya xilli cusub oo goos goos ah xilliga qaboobaha xilliga jiilaalka.
Wixii beereed xilliga qaboobaha waa suurad wacan in ay ururiyaan caleemaha inta lagu jiro ubax. Waxaa lagama maarmaan ah in la qalajiyo alaabta ceeriin ah ee ka sameysan sanduuq ku yaal warqad nadiif ah ama dhar qaro weyn leh, halka qallajiyaha heerkulku uusan ka sareeynin 35 ° C. Ku kaydi caleemaha qalalan ee digsi dhalada leh dabool. Xididdada waxaa la cunaa sanadka soo socda ka dib marka la beerto, iyo, sida wax yaryar daawooyinka, waxaa lagu qodaa saddex ilaa afar sano. Waxaa la rumaysan yahay in inta lagu jiro waqtigan rhizome ayaa helaya xoojinta ugu badan ee xubno waxtar leh.
Guga hore ama dayrta goor dambe, jarida qaybta cagaaran, qodo rhizome. Nadiifinta dhulka, maydhay. Qaybaha waaweyn ayaa la gooyaa qaybo yaryar ah, waxayna ku xoqanayaan silig cufan, waxaa lagu qalajiyey xaalad la hakiyey (waxaa suurtogal ah in qalajiyaha 35 ° C, jarjar qaybo yaryar).
Rootiyada la qalajiyey waa dhul ku Booqday Furimaha Dagaalka hilibka ama Booqdaha kafeega si aad uhesho. Ku kaydi alaabta ceeriin ee weelasha dhalada leh dabool furan.
Xilliga dayrta, abuurka bislaadaan, waa la goostay, la qalajiyey ka yar caleenta. Abuurka la qalajiyey ayaa loo kala saaraa burburka, oo la jarjaray oo lagu kaydiyaa si la mid ah sida xididdada iyo caleemaha.
Khilaafaadka isticmaalka ladnaanta
Xidid jacayl ah, inkastoo ay hagaajineyso sifooyinka, ayaa ka horjeeda. Waa mamnuuc in lagu daaweeyo haweenka uurka leh: keena dhiigga socodka dhiigga miskaha, cawska wuxuu keeni karaa dhicin.
Isku xirnaanta isticmaalka mukhaadaraadka ku saleysan jacaylka-geedaha ee glomerulonephritis iyo pyelonephritis, boog-garka iyo gasacad duodenal, dhiig karka.
Maanta, dad badan ayaa ka fekeraya cunno caafimaad leh, qaar badan oo hore oo aan la hilmaamin ayaa dib ugu soo noqonaya miiska cuntada. Waxaa laga yaabaa in urta murqaha iyo dhadhanka celery-celinta qaboobaha ma aha qof kasta oo jecel yahay, laakiin geedo waa hubaal iyo bogsashada.